Edith Wharton, otu n’ime akwụkwọ akụkọ America kachasị baa uru | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
John Ortiz | | Emelitere na 14/04/2021 18:14 | Akụkọ ndụ, Ndị edemede, Novela
Edith Wharton ka ọtụtụ ndị na-ahụta ka otu n'ime ndị akwụkwọ America kacha baa uru. Onye ode akwukwo nwere ihe kariri akwukwo 40, autobiography na ufodu nkpuru okwu diri otuto ya; ebiputara ufodu akwukwo nke onye dere ya post nwụrụ. Wharton kachasị na-eme akwụkwọ akụkọ na obere akụkọ, mana ọ na-edekwa akwụkwọ na mpaghara ndị ọzọ dịka: ịchọ mma na njem.
Ọtụtụ n'ime ndụ Edith Wharton biri na France, nke ọ nakweere dị ka ụlọ nke abụọ ya. Maka nke a, ọtụtụ akwụkwọ ya bụ Bekee na French. Na 1921, onye ode akwukwo dere akwukwo ya: Oge nke Imeghị Ihe nke o ji nweta Pulitzer Nrite. Ekwesiri ighota na Wharton bu nwanyi mbu aha ya: Dọkịta na-asọpụrụ causa site na Mahadum Yale.
1 Edith Wharton Biography
1.1 Marriagelụ di na nwunye
1.3 Nnukwu ọbụbụenyi
1.4 Wharton na agha ụwa mbụ
2 Ọrụ Edith Wharton
3 Fọdụ n'ime akwụkwọ kacha mma Edith Wharton
3.1 Oflọ nke Ọ (ụ (1905)
3.2 Oge nke Imeghị Ihe (1920)
3.3 Ileghachi anya azụ (1934)
Edith Newbold Jones mụrụ na Jenụwarị 24, 1862, na New York City. Ndị mụrụ ya bụ: George Frederic Jones na Lucretia Stevens Rhinelander. N'ihi ọnọdụ mmekọrịta ọha na eze na nke akụ na ụba nke ezinụlọ ya, Edith gụrụ akwụkwọ n'ụlọ, ya na ndị nkuzi kachasị mma. Na mgbakwunye, Ọ nwere ohere ọbá akwụkwọ buru ibu, nke o mere nke ọma, ebe ọ bụ na ọ na-enwekarị mmasị ịgụ ihe.
Marriagelụ di na nwunye
Na 1885, Edith lụrụ Edward Robbins Wharton, mmekọrịta a nwetụrụ nsogbu, na-emetụta ya n'ọtụtụ akụkụ. N'ikpeazụ, na 1913 - nke dịworị 28 afọ - Edith jisiri ike ịhapụ ikewa iwu na Edward, mgbe ogologo oge nke enweghị obi ụtọ na ọtụtụ nkwenye sitere n'aka di ya.
Otu n'ime agụụ mmekọahụ Edith bụ njem, ikekwe ọ bụ n'ihi n'eziokwu na ebe ọ bụ afọ 3 ọ mere ya na ndị mụrụ ya. Ọ bịara gafee Atlantic ihe dị ka ugboro 66, ebe ọ bụ na njem ya na Europe dum na-aga n'ihu. Ọ gara ọtụtụ oge nke na ọ dịrị ogologo ndụ na kọntinent ochie karịa ala nna ya. Ma nke a abụghị ihe ijuanya, ebe ọ bụ na ndụ na New York dị oke ọnụ.
Otu ihe Edith mere ka ọ pụta ìhè na akụkọ ọdịnala ya ebe mara mma ọ mara n'ụwa niile. N'ime saịtị ndị kacha emetụta ya bụ Camino de Santiago na Pórtico de la Gloria nke Katidral nke Santiago; o weere ha dịka otu n’ime ihe ịtụnanya na ịma mma niile.
Otu ihe mara Edith Wharton bụ ọbụbụenyi ya na ndị dị mkpa n'oge ahụ. Otu n'ime ha bụ onye edemede na onye edemede edemede Henry James, onye o nyefere otu isiakwụkwọ na akụkọ ndụ ya. Ọ, na mgbakwunye na ịbụ enyi ya, bụ onye ndụmọdụ ya. Ndị enyi ndị ọzọ Edith bụ: Theodotre Roosvelt, Jean Coteau, Sinclair Lewis, F. Scott Fitzgerald, na Ernest Hemingway.
Wharton na agha ụwa mbụ
Mgbe ọ malitere la Agha Worldwa Mbụ, Edith Wharton nọ na Rue de Varenne, na Paris. Ihe mbụ onye edemede ahụ mere bụ iji ikike ya na gọọmentị France kwere ka ọ gaa ọgba tum tum gaa n'ihu, na ebumnuche nke iburu ọgwụ na ijikọ aka dịka ọ dị mkpa.
N'otu ụzọ ahụ, ọ nwetara ọchịchị nke Cross of the Legion of Honor site n'aka gọọmentị France, nke a maka ọrụ ya na Red Cross na ọrụ mmekọrịta ya dị mkpa. E jidere ahụmahụ ndị a niile site n'aka otu onye edemede ahụ na isiokwu dị iche iche, bụ ndị e mechara gosipụta n’ edemede ahụ Na-alụ France: Site na Dunkerque ruo Belfort (1915).
Edith Wharton nwụrụ mgbe ọ dị afọ 75, na August 11, 1937 na Saint-Brice-sous-Forêt na mba ndị Paris. Ọnwụ ahụ bụ ihe ọghọm obi. Ozu ya zuru na ala dị nsọ nke Gonards na Versailles.
Ọrụ Edith Wharton
Mkpịsị odee nke onye edemede a magburu onwe ya mepụtara ọtụtụ ọrụ, yana ọtụtụ akwụkwọ, akụkọ, ndekọ njem na uri. Wharton nwere ụdị pụrụ iche na nke pụrụ iche, nke akọwapụtara ya na klaasị nke elu ya, n'agbanyeghị na o si ebe ahụ bịa. Ọrụ nke izizi mara ya bụ Ndagwurugwu Mkpebi (Ndagwurugwu nke Mkpebi, 1902).
Na 1905 bipụtara: Mirlọ Mirth (Houselọ nke Ọyụ), akwụkwọ akụkọ mere ka ọ bụrụ onye ama ama. Nke a malitere maka Edith Wharton oge dị ukwuu n'ịmepụta ezigbo akwụkwọ, dịka: Mkpụrụ nke Osisi (1907), Aha ya bụ Madame de Treymes (1907), Ethan Frome (1911), rue nnukwu ihe ịga nke ọma ya na 1920: Oge nke Imeghị Ihe, nke o meriri na-agbata n'ọsọ Pulitzer.
Fọdụ n'ime akwụkwọ kacha mma Edith Wharton
Joylọ ọ joyụ (1905)
Ọ bụ akwụkwọ edere na mmalite narị afọ nke XNUMX na New York. Ọ bụ akụkọ banyere Lily bart, nwanyị gụrụ akwụkwọ, nwee ọgụgụ isi ma maa mma nke nwanyị New York, bụ onye na-enweghị nne na nna mgbe ọ dị afọ 19. Afọ iri gachara ọ lụbeghị ma ka biri na nke nwanne mama ya, onye na-elekọta ya kemgbe nne ya nwụrụ. Ebumnuche Lily bụ ibi n'etiti ọha mmadụ, ọbụlagodi na ọ na-eme mkpebi ụfọdụ na-adịghị mma iji mee ya.
Na ije ya na-ahụ onye ọkaiwu a ma ama Lawrence Selden n'anya, onye na-abaghị ọgaranya na ọ bụ ya mere na anaghị ekwupụta ịhụnanya ya, n'agbanyeghị eziokwu na o weghachiri. Inweta ihe ọ chọrọ ga-esi ike, otu ihe kpatara ya bụ aha ọjọọ Bertha Dorset na-ewuru ya, mgbe ọ boro ya ebubo na ya na di ya nwere mmekọrịta. Ihe niile ga - eduga Lily na owu ọmụma, na - eche ihe na - abịabeghị.
Joylọ ọ joyụ
Oge nke Imeghị Ihe (1920)
Dika ekwuru, utu aha a mere ya Pulitzer Nrite. Akwụkwọ ọgụgụ a bụ akụkọ ịhụnanya nke dabeere na triangle ịhụnanya nke na-ewere ọnọdụ na New York, n'afọ 1870. Na mmepe nke ibé ahụ, a kọwara okomoko na omenala ndị a ma ama nke klaasị mmekọrịta oge ahụ n'ụzọ zuru ezu. Ndị isi ya bụ Newland Archer - onye ọka iwu -, onye ọ ga - alụ ọgụ bụ Wel Welland, na nwanne nna ya bụ Countess Olenska.
na-agba ụta Ọ bụ nwa nwoke nwere uche nke na-achọghị ikwugharị profaịlụ nke mmadụ abụọ ọkọlọtọ nke oge ahụ, ndị ekweghị ekwe na ndị ihu abụọ. Ọ na-emezu ụkpụrụ ya ma na-akatọ ọdịnala nke ọha mmadụ.; Ọ na-egosi nkwanye ugwu maka May, rue ụbọchị Olenska lọtara, na ọnụnọ ya dị mfe mere ka nwoke ahụ nwee obi abụọ banyere mmetụta ya. Nke a bụ otu akụkọ ga-esi metụta ihe metụtara nsogbu nke oge ahụ na nke ga-ejedebe na mgbanwe ndị a na-atụghị anya ya.
A anya azụ (1934)
Na 1934, Edith Wharton bipụtara akụkọ ndụ ya. Na ọrụ ọ na-amata na ọ dịrị ndụ kwekọrọ nnọọ na na-akọwa nke ọma n'oge ọ bụ nwata, ntorobịa na oge ntorobịa (belụsọ dị ka nke metụtara alụmdi na nwunye ya). Odee dere etu osi aru ihe obula o nwere obi uto banyere ya: igu akwukwo, ide ihe, ime njem na oru ndi ozo. Na mgbakwunye, ọ matara uru ịchọ mma bara na ndụ ya.
Mpaghara akwukwo na ndu Wharton bu ihe di nkpa na omuma ya. Nkọwapụta nke ọrụ ha na mkpali mmụọ nke dugara ha kee ha ka akọwara. Na mgbakwunye, na-ekwu maka ahụmịhe ya na WWI na mmekorita nke o nyere otutu ndi choro. Ihe ọzọ dị n'ime aha ahụ bụ ezigbo ndị ezigbo enyi Edith Wharton nwere n'oge ndụ ya, onye ọ raara akụkụ dị mkpa nke ọrụ ahụ nye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Akụkọ ndụ » Edith anam
Onye Ọchịchị Librarian nke Auschwitz
Jesús Sánchez Adalid. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Ngwá Agha nke Ìhè